Ciidamada Kenya oo baxay deegaanka Busaar ee gobolka Gedo iyo Al-shabaab oo la wareegtay – Radio Daljir
Ciidamada Kenya oo baxay deegaanka Busaar ee gobolka Gedo iyo Al-shabaab oo la wareegtay
Maarso 19, 2019 11:15 b 0
Ciidamada Kenya ee ayaa maanta isga soo baxay deegaanka Buusaar ee Gobolka Gedo sida ay radio Daljir uxaqiijiyeen dadka deegaanka.
Ciidamada ayaa jaray dhamaan Isgaarsiintii deegaanka intii ay ku guda jireen bixitaankooda .
Al-shabaab ayaa durbadiiba lawareegay deegaanka Busaar oo joogay meel aan ka fogan xaruntii ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaankaasi.
Deegaanka Buusaar ayaa ah mid istitaatiiji ah wuxuuna dhacaa Koonfur Galbeed ee Gobolka Gedo, Buusaar ayaa qiyaastii 40 Kmt dhanka Bari waxa ay uga beegantahay Magaalada Ceelwaaq waxayna isku xirtaa inta badan Tuulooyinka hoos yimaada Gobolka Gedo iyo sidoo kale Gobollada Jubboyinka.
Al-shabaab ayaa dhawaan sidan oo kale waxa qabsandeen deegaanka Fax fax dhuun ee Gobolka Gedo oo ay horay u baneeyeen ciidamada Kenya.
Taliyihii ciidamada Booliska Jabuuti oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay (Sawiro)